Şanlıurfa’da 51 yeni halk otobüsü törenle hizmete başladı – RayHaber | raillynews
Hometareenka51 baska dadweynaha cusub ayaa bilaabay adeegga Shanlurfa
28 / 12 / 2017 tareenka, GUUD, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Xarunta Isku-xirka Gaadiidka ee Magaalada Sanliurfa oo ay fulineyso 'Isbeddelka Gaadiidka Dadweynaha' ee ku yaalla xadka Siverek 51 adeegga basaska dadweynaha cusub ayaa bilaabmay xaflad.
Duqa magaalada Nihat Ciftci, oo sheegay in milkiilaha adeeggu yahay qaranka, ayaa yiri "wajiga foolka leh ee qaranka waa wejigeena".
Sanliurfa iyo degmooyinka degmada Sanliurfa caasimadda, kaas oo fuliyay mashruuca isbeddelka ee gaadiidka dadweynaha, wuxuu bilaabay isbeddelka degmada Siverek ee gaadiidka dadweynaha. Siverek, basaska iskaashiga waxaa lagu bedelay kuwa cusub.
Xarunta Isku-xirka Gaadiidka ee Magaalada Sanliurfa oo ay heshay baska dadweynaha ee 51 ayaa bilaabay inay adeegaan xaflad.
Basaska waxaa loogu talagalay dadka curyaamiinta ah waxayna leeyihiin hannaanka rakaabka 52. 7 baska 51 ayaa loo adeegsanayaa baska oo lagu qabanayo munaasabadda lagu qabtay Mashruuca Siverek Intercity Bus Bus Nihat Ciftci Sanliurfa Duqa Magaaladda, Ku-xigeenka Duqa Siverek Hamdi Hatipoglu, Guddoomiyaha Degmada AK Parti Siverek Ilhan Celik, Madaxa Isgaarsiinta Isgaarsiinta Siverek Public Mahmut Bozdag, ayaa ku soo biiray muwaadiniinta iyo dadka haysta gaadiidka .
CHAIRMAN ÇİFTÇİ, wejiga murugada ee qaranka waa wejigeena
Shanliurfa Metropolitan Municipality Siverek oo qeexaya mashruucyadiisa Duqa magaalada Nihat Ciftci, milkiilaha adeegga waa qaranka, wajiga wajiga qaranku waa wejigeenna, ayuu yidhi. Guryaha Siverek, gaadiidka dadwaynaha waxaa fuliyay wada shaqeyn. Nidaamka gaadiidka, awoodda iyo tayada ayaa ku haboon degmada Siverek. Awoodda gaadiidka ee Degmada Siverek waxaa kordhay Xarunta Isuduwidda Gaadiidka ee Degmada Metropolitan. Siverek way sii kordhaysaa, xaafadaha cusub waxay abuurayaan jidad cusub waxaanan kordhinay awoodda baabuurta. Waxaan wax weyn ka qabannay walaalaheena gaariga leh.
Gaadiidka leh hawo qaboojinta, ku habboon naafonimada, Nidaamka kaararka Urfa oo leh akhristaha kaarka Siverekliler ayaa ka faa'iideysan doona adeeggan. Siverek dabiicada dhaqan ahaaneed iyo dabeecad wanaagsan ayaa saameyn ku yeeshay xallinta dhacdada waxaanan wadajir u sameyneynaa 51. Waxaan qabaneynaa nolosha Siverek.
Waxan qaadeynaa dhallinyaro, gabow, ardayda iyo haweenka, mar walbana walaaca nolol maalmeedka ah, laakiin mar waliba waxaan la soconnaa wejiga murugada leh iyo iimaanka wanaagsan ee habka ku habboon darawalkeena Siverek iyo Şanlıurfa. Waxaan samaynaa cusboonaysiin cusub oo gaadiidka ah.
Mulkiilaha adeeggu waa qaranka, wejiga foolka leh ee qaranka waa wejigeenna. Haddii aan ku faraxsan nahay qaranka, waanu faraxsanahay, waxaanan xaq u leenahay in aan ku aaminno fiidkeena, waxaan madaxa u dhigannaa si habboon oo hurdo leh. Waxaan jeclaan lahaa in basku istaago, xarun baska lagu raaco iyo basaska cusubi waxay u noqon doonaan kuwo ka soo jeeda Siverekliler ".
Ku-xigeenka duqa magaalada Siverek Hamdi Hatipoglu ayaa u mahadceliyey Duqa Magaalada Nihat Ciftci dadaalkiisa ku aaddan gaadiidka dadweynaha .. Furaha muhiimka ah ayaa madaxweynaha loo soo bandhigay. Ka dib xafladda furitaanka, martida ayaa gooyay ribbada furan waxayna samaysay safar gaaban oo basaska ah.
Maxay Trambus maxay ugu adeegtay Shanlurfa?
Mashruuca Trambus 2 in lagu soo daayo Sanliurfa
Mashruuca Tareenka ee Gaziantep-Şanlıurfa oo bilaabmay
Xilliga Asphalt wuxuu bilaabmaa Shanleyurfa
Gaadiidka Baasaboorka iyo baska dadweynaha ayaa isku dhexdhexaadinaya
Maanta taariikhda: 29 December 1943 Laga soo bilaabo Jarmalka mar kale